Top 6 sản phẩm dưỡng da bằng nha đam tốt nhất nên dùng | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: Top 6 sản phẩm dưỡng da bằng nha đam tốt nhất nên dùng | Muasalebang in Muasalebang
I-aloe vera sekuyisikhathi eside ingesinye sezithako zobuhle eziwusizo kakhulu futhi ikhona emikhiqizweni eminingi yokunakekelwa kwesikhumba namuhla. Kukhona ijeli yenhlaba, imaski, ingqikithi, ukhilimu, … ngoba i-aloe vera ayinabungozi ngokwedlulele, iphephile kodwa ithuthukisa isikhumba ngempumelelo. Ngakho umkhiqizo? ukunakekelwa kwesikhumba nge-aloe vera Iyiphi ekufanele kakhulu ukuyithenga namuhla? Masihlole nathi!
Ukunakekelwa kwesikhumba okuphephile futhi okusebenzayo nge-aloe vera
1 Ukusetshenziswa kwe-aloe vera kuhle ekunakekeleni isikhumba
2 6 indlela yokwenza isikhumba sibe mhlophe ngenhlaba ngempumelelo
2.1 Uju kanye ne-Aloe Vera Mask
2.2 Ukunakekelwa kwesikhumba nge-aloe vera ne-turmeric
2.3 I-yogurt kanye ne-Aloe Vera Mask
2.4 Imaski yeqanda ne-Aloe Vera
2.5 Amanzi elayisi ne-aloe vera mask
2.6 Ubisi olusha kanye nemaski e-aloe vera
2.7 Izinyathelo ezisebenzayo zokunakekela isikhumba se-aloe vera ekhaya
3 Imikhiqizo engu-6 ehamba phambili yokunakekelwa kwesikhumba ye-aloe vera namuhla
3.1 1. TheFaceShop Jeju Aloe Fresh Soothing Gel
3.2 2. I-Thefaceshop Real Nature Aloe Face Mask
3.3 3. Ijeli Emanzisa Eyenziwe Nge-Innisfree Aloe Revital Multi-Purpose Moisturizing Gel
3.4 4. Naturals By Watsons Shower Gel nge Aloe Vera Extract
3.5 5. Ingqondo Ehlanzekile Ingqondo Ehlanzekile I-Aloe Vera Ngakho Igwebu Elihlanzekile Lokuhlanza
3.6 6. Ijeli Soothing SNP Aloe Vera 97% Soothing Gel
Ukusetshenziswa kwe-aloe vera kuhle ekunakekeleni isikhumba
I-Aloe vera ayinayo imiphumela emihle kuphela ekunakekelweni kwezempilo kwansuku zonke, kodwa futhi inezinzuzo eziningi zobuhle. Ngoba i-aloe vera iqukethe amaminerali amaningi, amavithamini, ama-amino acid. Ngakho-ke, uma usebenzisa imaski ye-aloe vera njalo, ingasiza isikhumba sakho ukuba sibushelelezi, sigcwele impilo, sibe nokunwebeka okungcono, ikakhulukazi ukuswakama kahle kakhulu esimweni sezulu esomile ebusika. Ikakhulukazi, i-aloe vera inhle kakhulu ekwelapheni izinduna namabala amnyama.
Ngaphezu kwalokho, i-aloe vera ingasiza futhi abesifazane ukuba bathole isikhumba esimhlophe esikhanyayo, bushelelezi, basuse izimpawu zokuguga, bagweme izinyawo zegwababa, imibimbi, bavuselele amangqamuzana esikhumba esikhumba futhi belaphe izilonda.umonakalo obangelwa izici zangaphandle.
Akugcini lapho, i-aloe vera iphinde ivikele isikhumba emisebeni ye-UV, ukukhanya kwelanga, indawo engcolile futhi ivimbela umdlavuza wesikhumba. Ungakwazi ukuhlanganisa i-aloe vera nezinye izithako zemvelo ukuze uthole isikhumba esikhanyayo, esibushelelezi.
6 indlela yokwenza isikhumba sibe mhlophe ngenhlaba ngempumelelo
Enye yezindlela ezonga kakhulu zokunakekela isikhumba se-aloe vera namuhla ukwenza imaski yakho ekhaya. Kunezindlela eziningi zokwenza imaski yenhlaba ehlanganiswe nezithako ezihlukene ezifana noju, ulamula, i-turmeric,… Nazi izindlela zokupheka eziyi-6 zokunakekelwa kwesikhumba ezinenhlaba njengesithako esiyinhloko sokusiza ukuthuthukisa isikhumba sakho ngempumelelo.
Uju kanye ne-Aloe Vera Mask
Izinto zokulungiselela: 1 isipuni soju, i-aloe vera gel.
Geza amaqabunga e-aloe vera futhi ususe isikhumba esiluhlaza ngokuphelele. Thatha inyama engaphakathi, bese ubona i-puree ukuze uhlunge ijeli. Faka uju nejeli yenhlaba enkomishini engu-1, hlanganisa kahle. Faka ingxube ebusweni bakho cishe imizuzu engu-15-20, bese ugeza ngamanzi. Sebenzisa ngokuqhubekayo izikhathi ezingu-2-3 ngesonto, isikhumba sakho sizoba mhlophe futhi sibe bushelelezi kakhulu.
Ukunakekelwa kwesikhumba nge-aloe vera ne-turmeric
I-Turmeric powder – isithako esijwayelekile esivame ukusetshenziswa ebuhleni. Ngoba i-turmeric ilungile kakhulu futhi ifanele cishe zonke izifundo nazo zonke izinhlobo zesikhumba. Ngaphezu kwalokho, i-turmeric powder nayo inezakhiwo ezinamandla kakhulu ze-antibacterial, isiza ukunakekela isikhumba ngokushesha. Ngakho-ke, lapho uhlanganisa i-turmeric ne-aloe vera ukwenza imaski esetshenziswa esikhumbeni nsuku zonke, izokusiza ukuthi uthole imikhiqizo yokunakekelwa kwesikhumba eyongayo nehlala isikhathi eside.
Hlanganisa i-turmeric powder nejeli ye-aloe vera (yenza okufanayo ngenhla). Bese, sebenzisa ingxube ngokulinganayo ebusweni bakho, vumela ukuba zome ngokwemvelo imizuzu engaba ngu-20 bese ugeza ubuso bakho ngamanzi afudumele. Sebenzisa imaski kabili ngeviki ukuze uthole imiphumela engcono kakhulu.
I-yogurt kanye ne-Aloe Vera Mask
Ukudla noma ukugqoka imaski kuhle esikhumbeni sakho. Ngoba iyogathi iqukethe ama-acids asiza ukwenza isikhumba sibe mhlophe, afiphale amabala amnyama, i-melasma, ama-freckles bese wengeza amanzi namanye amavithamini esikhumbeni sakho.
Ukuze unakekele isikhumba sakho nge-aloe vera ne-yogurt, udinga nje ukuthatha iyogathi nejeli ye-aloe vera ngesilinganiso se-1: 1, uhlanganise kahle, bese usebenzisa imaski imizuzu engu-15-20, bese ugeza ngamanzi.
Ukubuyekezwa kwe-Dakami skin cream kuhle?
Ingabe Amamaski ka-Kiehl Alungile? Ukubuyekezwa okuningiliziwe Amamaski aphezulu ayi-5 okunakekelwa kwesikhumba Kiehl’s
Amakhilimu esikhumba aphezulu amadoda kufanele asebenzise
Imaski yeqanda ne-Aloe Vera
Izikhupha zamaqanda nezimhlophe zamaqanda zombili zisetshenziselwa ukwenza ubuso bube mhlophe. Uma i-yolk ifanele isikhumba esomile, umhlophe ufanelekile kakhulu ngesikhumba esinamafutha, esinamafutha.
Shaya amaqanda amhlophe, bese wengeza i-aloe vera uhlanganise kahle. Sebenzisa le nqubo yokunakekelwa kwesikhumba se-aloe vera njalo, izikhathi ezingu-2-3 ngesonto ngaphambi kokulala ngokwanele ukuze uthole umphumela omuhle kakhulu wokumhlophe. Uma ungakwazi ukubekezelela iphunga lamaqanda, ungangeza amaconsi ambalwa kalamula ukuze uvale iphunga leqanda.
Ukunakekelwa kwesikhumba nge-aloe vera kanye nezithako ezitholakala kalula
Amanzi elayisi ne-aloe vera mask
Abaningi benu basebenzisa amanzi elayisi ukuze benze isikhumba sakho sibe mhlophe, kodwa ukwenza ngokungalungile kuholela ezinduna. Kufanele usebenzise amanzi kuphela ukugeza irayisi izikhathi ezingu-2 no-3 ukuze uqinisekise ukuthi uthuli luhlanzekile futhi kufanele usebenzise amanzi okuxazulula ngezansi ngoba kunezakhi eziningi. Amanzi elayisi kufanele asetshenziselwe ukunakekelwa kwesikhumba kuphela emini futhi agcinwe esiqandisini.
Ngokufanayo namanye amamaski amhlophe esikhumba, engeza amanzi okugeza irayisi nejeli yenhlaba ngesilinganiso esingu-1:1 ukuze wakhe ingxube yokunamathela. Qaphela, geza ubuso bakho ukuze ugweme ukuvala izimbotshana nezinduna.
Ubisi olusha kanye nemaski e-aloe vera
Ngaphandle kokusebenzisa ubisi olusha njengesiphuzo sansuku zonke sokwengeza i-calcium namavithamini, kunabesifazane abaningi abake basebenzise ubisi olusha oluhlanganiswe nenhlaba ekunakekelweni kwesikhumba, ikakhulukazi ukwenza isikhumba sibe mhlophe. Ngoba ubisi olusha lusiza ukuthambisa futhi lufiphale umbala wesikhumba.
Landela isilinganiso esifanayo se-1:1 yobisi olusha kanye nenhlaba ukuze usebenzise. Qaphela, ubisi oluvela ezilwaneni ezahlukene luzoba nokuqukethwe okunomsoco okuhlukile, ngakho-ke sicela ufunde ulwazi ngaphambi kokulusebenzisa ukuze uthole umphumela wokunakekela isikhumba ongcono kakhulu.
Izinyathelo ezisebenzayo zokunakekela isikhumba se-aloe vera ekhaya
Ukuze uthuthukise izinzuzo zamaski amahle kakhulu we-aloe vera, udinga ukwenza ngokugcwele lezi zinyathelo ezilandelayo:
– Isinyathelo 1: Geza nge-cleaner ukuze ususe ukungcola namafutha amaningi esikhumbeni.
Isinyathelo sesi-2: Khipha isikhumba esifile. Isendlalelo sesikhumba esifile esikhumbeni sizovimbela ukumuncwa kwezakhi esikhumbeni, futhi ngesikhathi esifanayo senze isikhumba sibe buthuntu futhi siguge.
– Isinyathelo sesi-3: Landela izinyathelo zokunakekela isikhumba, ukunakekelwa kobuso njengenjwayelo.
Imikhiqizo engu-6 ehamba phambili yokunakekelwa kwesikhumba ye-aloe vera namuhla
1. TheFaceShop Jeju Aloe Fresh Soothing Gel
Uma ubhekisa kujeli yenhlaba, akunakwenzeka ukuziba umuntu oqinile we-The Face Shop, okuyiJeju Aloe Fresh Soothing Gel. Lo mkhiqizo ngokusobala unesithako esiyinhloko se-aloe vera, esiza ukuthobisa, ukuthambisa nokubuyisela isikhumba ngemva kokulimala (ukushiswa yilanga, ikhasi, ukukhama induna, …). Ngisebenzisa lo mkhiqizo kakhulu njalo uma ngibuya ohambweni ngoba isikhumba sami sishiswe yilanga, sisiza isikhumba sami silulame ngokushesha, singabe sisaba mnyama noma sibomvu. Ikakhulukazi, iphephile kakhulu futhi ilungile, ngakho ifaneleka kuzo zonke izinhlobo zesikhumba, kuhlanganise nesikhumba esinamafutha noma esibucayi. Ayinamafutha nhlobo :)).
Inani lale jeli yenhlaba evela e-The Face Shop yishubhu engu-140k / 300ml (isesimweni seshubhu nebhodlela eliyindilinga elinenani elifanayo) elingasetshenziswa isikhathi eside. Ingasetshenziswa kokubili ebusweni nasemzimbeni.
Ijeli yenhlaba ye-Face Shop inezinguqulo ezi-2, ishubhu elilungele ukuhamba kanye nebhodlela elikhulu eliyindilinga.
XHUMA THENGA I-GENUINE SKIN CARE GEL THE FACE SHOP
2. I-Thefaceshop Real Nature Aloe Face Mask
Futhi umkhiqizo we-Face Shop, ukuze uqiniseke ngokuphepha kwakhe. Le mask isiza ukuhlinzeka ngezakhi esikhumbeni, igcwalise umswakama futhi ikhulule isikhumba esicasuliwe. Le mask izofaneleka kakhulu esikhumbeni esiphelelwe amanzi emzimbeni, esikhumbeni esomile nesiguga noma ukuxebuka ngenxa yokushiswa yilanga.
Imaski yenhlaba ye-Face Shop.
ISIXHUMANISO SOKUTHENGA AMASK OWAQALA WE-FACE SHOP ALOE
Uma kuqhathaniswa nezinye izifihla-buso, le maski yenhlaba ifanele ukuba sepotimendeni lakho ukuze ikuphelezele kulo lonke uhambo noma uhambo lwebhizinisi ukuze unikeze imisoco efika ngesikhathi esikhumbeni.
Okuwukuphela kwento embi yale maski yokunakekela isikhumba yenhlaba ukuthi ibiza kancane, 27k/piece, kodwa uma uhlola ikhwalithi, ingu-9/10. Iwufanele utshalomali.
3. Ijeli Emanzisa Eyenziwe Nge-Innisfree Aloe Revital Multi-Purpose Moisturizing Gel
Omunye “weavyweight” oqhudelana naye we-The Face Shop naye uvela kumkhiqizo odumile waseKorea okuyi-Innisfree Aloe Revital Soothing yejeli enezinjongo eziningi. Lo khilimu unezithako ezikhishwe i-aloe vera entsha efika ku-93% e-Jeju Island, esiza ekunikezeni umswakama esikhumbeni ngaphandle kokunamafutha, ukuvala izimbotshana.
Ijeli ye-Aloe vera evela endlini edumile ye-Innisfree.
Amandla ale jeli yenhlaba ukuthi yenziwe ngobuchwepheshe be-Aloe Vitalizing Energy ™ ukuze kuqiniswe umgoqo wesikhumba wesikhumba esinempilo, esinempilo. Inamandla okuthambisa ngaso leso sikhathi hhayi esikhumbeni kuphela kodwa nezinwele, ubuso, izandla, izinyawo noma izindawo lapho isikhumba somile, sishiswe yilanga emzimbeni.
Ngenxa yezithako zayo eziyingozi kakhulu, ijeli yenhlaba ye-Innisfree ifanele zonke izinhlobo zesikhumba, ikakhulukazi isikhumba esilinyazwe imithelela yangaphandle kanye nokushiswa yilanga okudinga ukululama.
Ijeli iyabonakala, imunca ngokushesha futhi ayinamafutha.
BUKA LAPHO UNGAYIDAYISA IMIKHIQIZO NGENANI ELIHLE KAKHULU
Okunye ukusetshenziswa kwalo mkhiqizo okungaduma kakhulu kwabesilisa ukupholisa nokupholisa amanxeba adalwa ukushefa. Lapho isikhumba siklwejwa nge-razor, abafana bangasebenzisa ijeli ngobumnene kuleyo ndawo ukuze bathole isikhumba sipholile futhi maduzane silulama futhi.
Inani: 160k/ishubhu lika-300ml
4. Naturals By Watsons Shower Gel nge Aloe Vera Extract
I-Naturals ka-Watsons Soft Shower Gel ene-aloe vera ishiya isikhumba sakho sithambile futhi sinephunga elimnandi ngemva kokusetshenziswa. Le lotion ye-aloe vera ivela e-Thailand kodwa ikhishwa ku-organic aloe vera etshalwa e-US nase-UK futhi iqinisekiswe ngedermatological ukuthi iphephile esikhumbeni sakho. Umkhiqizo ungenye yezimfihlo zokunakekelwa kwesikhumba kulabo abathanda ubuhle.
Ijeli yokugeza ye-aloe vera yemvelo.
Ngokolwazi oluvela enkampanini, i-Naturals Aloe Vera ilungiselelwe ngokukhethekile kusuka kujusi nenyama ye-organic aloe vera kanye nezinhlanganisela ezithambisa isikhumba, ukuvimbela inqubo yokuguga, ukunikeza isikhumba ukubukeka kobusha nokuthambile. Ukusetshenziswa kwefomula ethuthukisiwe yejeli yokugeza ukuhlanza ngempumelelo nokuhlinzeka ngamanzi okuthambisa isikhumba.
Umkhiqizo ngaphezu kokuhlanza ukungcola, ukuvikela isikhumba nakho kusiza ukwakha umgoqo oqinile womswakama futhi uvimbele ukulahlekelwa kwamanzi esikhumbeni, ibhalansi yomswakama ophezulu wesikhumba, okwenza isikhumba sithambile futhi sikhanye. Le ngane futhi inephunga elimnandi lemvelo elikusiza ukuba uphumule, uvuselele umoya wakho, uvuselele amandla ngemva kosuku olude lomsebenzi ocindezelayo.
Ikakhulukazi umkhiqizo awunawo ama-parabens, ama-sulfate … aphephile ngokuphelele esikhumbeni sakho nempilo.
Inani: 880k / ibhodlela lika-490ml, elithengiswa eWatsons Shopee Mall yangempela.
Ngaphandle kwejeli yokugeza, inkampani iphinde ibe nejeli yokuthambisa ethambisa isikhumba futhi yondle isikhumba kusuka ekujuleni.
Intengo yejeli yokugeza ene-aloe vera 155k / ishubhu lika-200ml
5. Ingqondo Ehlanzekile Ingqondo Ehlanzekile I-Aloe Vera Ngakho Igwebu Elihlanzekile Lokuhlanza
I-Aloe vera ayisetshenziswa kuphela ekukhiqizeni imaski nama-gel okugeza, kodwa futhi ingasetshenziswa ukwenza izinto zokuhlanza ubuso. Edume kakhulu yile Pure Mind Aloe So Fresh Cleansing. Umkhiqizo ukhishwa ku-aloe vera ukuze uthobe isikhumba esicasuliwe, unikeze izakhi esikhumbeni, unikeze isikhumba esisha esifanelekile esikhumbeni esishisayo. Gcwalisa umswakama odingekayo ukuze ususe izimonyo nokungcola ngobumnene ukuze usize isikhumba sihlanzeke futhi sicace.
Isihlanzi sobuso esihlanzekile sinesithako esikhulu esivela kunhlaba.
Intengo yalesi sihlanzi sobuso senhlaba yehliswa ngo-40% isuka ku-89k iye ku-53.4k/tube engu-100ml, intengo inengqondo kakhulu ukuthi abafundi bathole umkhiqizo wokunakekela isikhumba wangempela. .
6. Ijeli Soothing SNP Aloe Vera 97% Soothing Gel
Uma udinga umkhiqizo wokunakekelwa kwesikhumba onempilo, khona-ke le SNP Aloe Vera 97% Soothing Gel iyisinqumo esingcono kakhulu kuwe. Ngezithako ezifika ku-97% i-aloe vera, inokusetshenziswa okuyinhloko kokuthambisa nokupholisa isikhumba ngokushesha, ilungele labo abasanda kubuya elangeni noma labo abanesikhumba esomile, isikhumba esidinga ukondleka okulula.
Ijeli yokuswakama ene-aloe vera engu-97% evela kumkhiqizo we-SNP.
Amadoda angasebenzisa futhi lokhu lapho eshefa, vele asebenzise ungqimba oluncane ngemva kokushefa, leyo ndawo yesikhumba yondliwe, inciphisa umonakalo. Angakwazi futhi ukuyisebenzisela ukunakekelwa kwezinwele, ukunakekelwa kwamehlo, … kodwa ukusetshenziswa okuvame kakhulu kusewukugcoba umzimba.
Inani: 119k/300ml ibhodlela
Ngakho-ke, i-Fresh Lemon wabelane nawe ngolwazi oluphelele mayelana nenhlaba ekunakekelweni kwesikhumba nezinwele. Kholwa ukuthi ngalesi sihloko, usuqonde kangcono ngenhlaba futhi ukhethe umkhiqizo ofaneleka kakhulu. Ngaphezu kwalokho, uma kukhona imikhiqizo yokunakekelwa kwesikhumba ye-aloe vera ocabanga ukuthi mihle – eshibhile, sicela ubeke amazwana ngezansi ukuze ngikwazi ukuyengeza!